समाचार - टीमवर्क
क्रम मा एक अर्का संग राम्रो संग जान्न र हाम्रो JINJIA मशीनरी को लागी टीम वर्क बढाउन, हाम्रो कम्पनी जून १ on मा एक आउटडोर टीम वर्क गतिविधि गर्न को लागी सबै कर्मचारीहरु संगठितth, २०२१. गतिविधि को विषय "एकता र सहयोग - टीमवर्क" हो।
हामी बिहान :00: ०० बजे शुरू गरीयो र आधा घण्टा पछि गन्तव्य आइपुग्यौं। गतिविधि मुख्य रूप मा बिभिन्न खेलहरु बाट बनेको थियो। प्रत्येक खेल एक अर्का संग टीम वर्क र सहयोग बढाउन को लागी डिजाइन गरीएको थियो। खेल पछि, हामी आफैले स्वादिष्ट लंच बनाएका छौं। सम्पूर्ण प्रक्रिया को दौरान मा हामी एक अर्का संग काम गरे, JINJIA टीम वर्क आत्माहरु लाई धेरै राम्रो संग देखाउँदै।
यो साँच्चै एक सफल आउटडोर टीम वर्क गतिविधि हो। यो सहकर्मीहरु को बीच सम्बन्ध बढाउँछ, र पनि कम्पनी राम्रो संगति र टीम वर्क लाभ। यस गतिविधि को माध्यम बाट, विश्वास छ कि हामी एक टीम को रूप मा धेरै नजिक बाट एकजुट हुनेछौं। यसले हामीलाई भविष्यमा अझ राम्रो टीम काम ल्याउँछ।
उत्कृष्ट टीम र टीमवर्क हाम्रो ग्राहकहरु लाई उत्कृष्ट हवाई जहाज भागहरु र सेवाहरु प्रदान!
पोस्ट समय: जून-29-2021